Warshadda Shiinaha ee Alloy Wajiyada Daaqadda Ares80-1 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Daaqadda aluminiumka lagu jiido Ares80-1 wuxuu leeyahay lakabyo aluminium ah iyo xargaha halkii ay ka ahaan lahaayeen bir, bir ama alwaax. Kuwani waa xulasho caan ka ah kuwa wax dhisaa oo ku dhowaad goob kasta inta aad ugu dhowdahay inaad ku aragto meheradaha ganacsiga ama warshadaha marka loo eego guryaha. Thanks to xoogga wanaagsan ee cabirka culeyska, dariishadaha aluminiumka Ares80-1 waa kuwo aad u dabacsan.
Daaqadda Aluminum-ka ee is-jiidida-Ares80-1
Waxaa jira astaan ​​waddo oo lagu socdo oo looga fogaado biyaha iyo boodhka dariishadaha Aluminium
Khibraddu waxay la mid tahay tayada oo macquul ah qiimo macquul ah. Daaqada Aluminiyam ee daaqada Ares80-1 ayaa leh in ka badan hal milyan oo macaamiil ah oo qanacsan oo ka kala socda 40 dal iyo 20 sano oo waayo aragnimo ah. Daaqada Aluminiyam ee loo yaqaan 'Aluminum slide Ares80-1' ayaa daryeela tallaabo kasta oo howsha ka mid ah, oo lagu taageerayo aqoonta iyo waaya-aragnimada ka soo baxday labaatan sano ee cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka.
Astaamaha nidaamka muraayadaha slide Aluminum Ares 80-1
1. Shabakadda Kaneecada: Daaqadda Aluminiyam ee jiifa Ares80-1 wuxuu leeyahay shabaqa kaneecada ka sameysan ee birta looga hortago tuugada.
2. Wadada sare: Daaqada Aluminiyam ee loo yaqaan 'Aluminium slide' Ares80-1 wuxuu isticmaalaa naqshad ballaaran oo loogu talagalay jidka sare.
3. Qoraalka galaaska ee hoose: Daaqada Aluminiyam ee jiifa Ares80-1 wuxuu isticmaalaa dherer kala duwan gudaha iyo banaanka muraayadda hoose si looga fogaado daadashada dabaysha.
4. Sharaxa muraayadda toosan: Daaqada Aluminum Sinuulida Ares80-1 waxay bixisaa arc xoojinaysa naqshadeynta kaladuwan.
5. Taariikhda dhinaca: Daaqada Aluminium Suuqa Ares80-1 wuxuu adeegsadaa seddex shaabad oo sumadaysan si looga hortago in biyuhu gudaha galaan.
6. Wadooyinka: Daaqadda Alloominta Aluminum Suuqa Ares80-1 waxay bixisaa laba ama sedex profile track oo kala duwan oo xulasho ah.
7. Quful: Daaqadda Alloomiyam ee jiifa Ares80-1 waxay bixisaa quful aan muuqan, xirid quful ama xarig bir ah.
8. Koofiyadaha: Allouminta daaqada Aluminium Ares80-1 waxay u isticmaashaa koofiyado nafaqooyin ah oo loogu talagalay godadka qodista.
9. Muraayadaha: Daaqada Aluminiyam ee loo yaqaan 'Aluminium slide Ares80-1' waxay bixisaa hal galaas ama labo-koob (5 + 9A + 5) oo kaladuwan ah.
10. Garyaqaannada: Daaqada Alloominta Aluminium Ares80-1 wuxuu adeegsadaa isku-habeyn sidda giraangiraha.
Hore: Daaqadda Aluminiyuca Fiirsada Ares75F
Xiga: Suuqa Qiimaha jaban ee Ares80